महिलाले सहवासको समयमा विर्य झरे न झरेको थाहा पाउछन ? – Dhadingnews.com – Exploring social, politics, agricultural, health, entertainment and district news of dhading.
प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०७३, मंगलवार २२:२०
महिलाले सहवासको समयमा विर्य झरे न झरेको थाहा पाउछन ? जानीराखौ ! तपाईं यौन आनन्दको अन्तिम खुडकिलोसम्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? चरम आनन्द (अर्गाज्म) भन्दा अघि नै चिसिनुहुन्छ ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिलाले चाहे हरेक पटक चरम सुख उठाउन सक्छन् ।त्यसको लागि धैर्यता र यौनसाथी बीच उचित तालमेल हुनु जरुरी छ ।
महिलाले चरम सुख प्राप्त गर्ने प्रसंगमा पुरुष साथीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अनुसन्धानमा उल्लेख छ । पुरुष साथीले महिला साथीलाई महत्त्व दिने बानी गरे उनीहरू चरम आनन्दतिर सहजै जान सक्छन्
१ चैत्र २०७३, मंगलवार २२:२० मा प्रकाशित